Female Sterilization - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမြိုးသမီးတှသေားကွောဖွတျကွတယျဆိုတာ တဈသကျတာကိုယျဝနျမရအောငျ တားဆီးတဲ့နညျးလမျးပဲဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာတော့ သားကွောဖွတျဖို့ကိုလြှောကျလှာတငျရပါတယျ။သတျမှတျထားတဲ့အသကျအရှယျ ကလေးဦးရနေဲ့ ခှဲစိတျမှေးဖှားထားတဲ့အကွိမျရတေို့ကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားပါတယျ။ရောဂါအခွအေနတေဈခုခုအရ ကိုယျဝနျဆောငျဖို့မဖွဈနိုငျတဲ့အမြိုးသမီးမြားကိုလညျး သားကွောဖွတျပေးလရှေိ့ပါတယျ။
ဘယျလိုနညျးနဲ့ ကိုယျဝနျမရအောငျ တားဆီးတာလဲ?
သားကွောဖွတျခွငျးဟာ အမြိုးသမီးရဲ့သားဥနဲ့အမြိုးသားရဲ့သုကျပိုးတို့တှဆေုံ့မယျ့လမျးကွောငျးကိုဖွတျတောကျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ဒီလမျးကွောငျးဟာ သားဥပွှနျဖွဈတဲ့အတှကျ သားကွောဖွတျတဲ့အခါ သားဥပွှနျနှဈဖကျလုံးကို ဖွတျတောကျခွငျး ပိတျဆို့ခွငျးပွုလုပျရပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာအသုံးမြားတှငျကယျြတာကတော့ ခှဲစိတျပွီးသားကွောဖွတျနညျးပါ။ခှဲစိတျတဲ့အခါမှာလညျး ဝမျးခေါငျးအတှငျးကိုမှနျပွောငျးနဲ့ကွညျ့ရှုပွီး အသေးစားခှဲစိတျမှုပွုလုပျတာရယျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးဗိုကျခှဲပွီးသားကွောဖွတျတာရယျဆိုပွီးရှိပါတယျ။သားဥပွှနျ နှဈဖကျလုံးကို ခညျြပွီးဖွတျတောကျလိုကျခွငျး သို့မဟုတျ ကလဈ/ညှပျတဈခုခုနဲ့ညှပျပွီးပိတျဆို့လိုကျခွငျးစသဖွငျ့ နညျးအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။
ကလေးကိုခှဲစိတျမှေးဖှားရငျးတဈပါတညျးသားကွောဖွတျနိုငျသလို ရိုးရိုးမှေးပွီးမှသားကွောသီးသနျ့ဖွတျတာမြိုးလညျး လုပျနိုငျပါတယျ။
မခှဲစိတျဘဲ သားကွောဖွတျနညျးကတော့ အသုံးနညျးပါတယျ။ဒီနညျးကတော့ သားကွောဖွတျမယျ့ကိရိယာတဈခုကို အမြိုးသမီးရဲ့ မိနျးမကိုယျကနတေဈဆငျ့ သားအိမျထဲ သားအိမျကနေ သားဥပွှနျဆီရောကျအောငျ ထညျ့သှငျးရတာပဲဖွဈပါတယျ။ဒီနညျးနဲ့ သားဥပွှနျတှကေိုပိတျဆို့လိုကျခွငျးဖွငျ့ သားကွောဖွတျတဲ့နညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီသားဆကျခွားနညျးက မိမိရဲ့လိငျမှုဘဝကို မထိခိုကျနိုငျပါဘူး။ဆိုလိုတာက လိငျဆကျဆံတဲ့အခါတိုငျး ကိုယျဝနျရသှားမှာစိုးကွောကျစိတျတှေ လိငျစိတျအားနညျးတာတှမေဖွဈစပေါဘူး။
သားကွောဖွတျတာဟာ တခွားသောကျဆေး ထိုးဆေးတှလေို မိမိရဲ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှ ဟျောမုနျးအတကျအကကြို သကျရောကျမှုမဖွဈစပေါဘူး။
သောကျဆေးထိုးဆေးတှလေို ဆေးသောကျဖို့ ဆေးထိုးဖို့မသှေ့ားမှာလညျး မပူရတော့ပါဘူး။
သားကွောဖွတျတာဟာ လိငျကတဈဆငျ့ကူးစကျနိုငျတဲ့ရောဂါတှကေိုမကာကှယျနိုငျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ဒီရောဂါတှကောကှယျဖို့အတှကျ condom ကိုတော့သုံးရပါမယျ။
သားကွောဖွတျတာဟာ ကလေးပွနျရဖို့ခကျပါတယျ။သားကွောမဖွတျခငျမှာကာယကံရှငျအမြိုးသမီးဟာ ကလေးမယူတော့တာသခြောမှပွုလုပျစခေငျြပါတယျ။ဖွတျတောကျထားတဲ့ပွှနျတှကေိုပွနျဆကျအောငျလုပျရတာအောငျမွငျဖို့ခကျခဲပါတယျ။ကလေးမယူဖွဈတော့တာ လုံးဝမသခြောသေးဘူးဆိုရငျ သားကွောဖွတျတဲ့နညျးနဲ့ သန်ဓတေားဖို့မရှေးသငျ့ပါဘူး။
ရှားရှားပါးပါးဖွဈခဲတာကတော့ သားကွောဖွတျပွီးမှ ကိုယျဝနျရသှားတာပါ။ဖွတျတောကျထားတဲ့ပွှနျနှဈခုဟာ အခနျ့မသငျ့လို့ပွနျဆကျသှားခဲ့တယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျပါတယျ။ဒီလိုဖွဈရငျကိုယျဝနျဟာသာမနျအတိုငျးမဟုတျဘဲ သားဥပွှနျလို သားဥအိမျလိုနရောမြိုးမှာ မှားပွီးသန်ဓတေညျဖို့အခှငျ့အလမျးလညျးပိုမြားတတျပါတယျ။ဒါဟာ အသကျအန်တရာယျကိုဖွဈစတေတျလို့ သားကွောဖွတျထားတဲ့အမြိုးသမီးတဈဦး ရာသီမလာတာမြိုးဆို သတိထားသငျ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ဖွဈနိုငျတဲ့အခှငျ့အလမျးကတော့ အတေျာ့ကိုနညျးပါတယျ။သားကွောဖွတျထားတဲ့အမြိုးသမီးဟာ သားကွောဖွတျတဲ့နညျးပျေါမူတညျပွီးနောကျတဈခါရာသီလာတဲ့အခြိနျအထိ သို့မဟုတျ သုံးလအထိသန်ဓတေားဆေးတဈမြိုးမြိုးကိုမှီဝဲဖို့လိုပါတယျ။ဖွတျတောကျထားတဲ့ သားဥပွှနျတှေ အနာကကျြစဖေို့ အခြိနျပေးရတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
သားကွောဖွတျတာဟာလညျး အခွားခှဲစိတျမှုမြားလိုပဲ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသှေးယိုတာ ပိုးဝငျတာလိုမြိုးတှလေညျးဖွဈတတျပါတယျ။
သားကွောဖွတျတာနဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆတှဖွေဈတဲ့ အကွောသသှေားတာ သှေးဆုံးကိုငျတယျဆိုတာတှဟောမှားပါတယျ။အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုထိနျးခြုပျတဲ့ oestrogen ဟျောမုနျးဟာ သားဥအိမျကထှကျတာဖွဈပွီး သားဥပွှနျနဲ့မသကျဆိုငျလှပါဘူး။မွနျမာပွညျကအမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားဟာ အသကျကွီးမှသားကွောဖွတျတတျကွတဲ့အတှကျ သဘာဝအတိုငျးသှေးဆုံးကိုငျခြိနျကို သားကွောဖွတျခွငျးကွောငျ့လို့ အထငျမှားတတျကွတာဖွဈပါတယျ။
သားကွောဖွတျတာဟာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးနညျးပွီး ရာနှုနျးပွညျ့နီးပါးကိုယျဝနျတားနိုငျတဲ့နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ကလေးပွနျရအောငျလုပျဖို့ခကျတဲ့အတှကျ သခြောမှသာ ဆုံးဖွတျခကျြခစြလေိုပါတယျ။
အမျိုးသမီးတွေသားကြောဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာ တစ်သက်တာကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ သားကြောဖြတ်ဖို့ကိုလျှောက်လွှာတင်ရပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်အရွယ် ကလေးဦးရေနဲ့ ခွဲစိတ်မွေးဖွားထားတဲ့အကြိမ်ရေတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများကိုလည်း သားကြောဖြတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးတာလဲ?
သားကြောဖြတ်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးရဲ့သားဥနဲ့အမျိုးသားရဲ့သုက်ပိုးတို့တွေ့ဆုံမယ့်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာ သားဥပြွန်ဖြစ်တဲ့အတွက် သားကြောဖြတ်တဲ့အခါ သားဥပြွန်နှစ်ဖက်လုံးကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာအသုံးများတွင်ကျယ်တာကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးသားကြောဖြတ်နည်းပါ။ခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဝမ်းခေါင်းအတွင်းကိုမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ရှုပြီး အသေးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်တာရယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဗိုက်ခွဲပြီးသားကြောဖြတ်တာရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။သားဥပြွန် နှစ်ဖက်လုံးကို ချည်ပြီးဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကလစ်/ညှပ်တစ်ခုခုနဲ့ညှပ်ပြီးပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းစသဖြင့် နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ကလေးကိုခွဲစိတ်မွေးဖွားရင်းတစ်ပါတည်းသားကြောဖြတ်နိုင်သလို ရိုးရိုးမွေးပြီးမှသားကြောသီးသန့်ဖြတ်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မခွဲစိတ်ဘဲ သားကြောဖြတ်နည်းကတော့ အသုံးနည်းပါတယ်။ဒီနည်းကတော့ သားကြောဖြတ်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုကို အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကနေတစ်ဆင့် သားအိမ်ထဲ သားအိမ်ကနေ သားဥပြွန်ဆီရောက်အောင် ထည့်သွင်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ သားဥပြွန်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းဖြင့် သားကြောဖြတ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသားဆက်ခြားနည်းက မိမိရဲ့လိင်မှုဘဝကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာစိုးကြောက်စိတ်တွေ လိင်စိတ်အားနည်းတာတွေမဖြစ်စေပါဘူး။
သားကြောဖြတ်တာဟာ တခြားသောက်ဆေး ထိုးဆေးတွေလို မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ဟော်မုန်းအတက်အကျကို သက်ရောက်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။
သောက်ဆေးထိုးဆေးတွေလို ဆေးသောက်ဖို့ ဆေးထိုးဖို့မေ့သွားမှာလည်း မပူရတော့ပါဘူး။
သားကြောဖြတ်တာဟာ လိင်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရောဂါတွေကာကွယ်ဖို့အတွက် condom ကိုတော့သုံးရပါမယ်။
သားကြောဖြတ်တာဟာ ကလေးပြန်ရဖို့ခက်ပါတယ်။သားကြောမဖြတ်ခင်မှာကာယကံရှင်အမျိုးသမီးဟာ ကလေးမယူတော့တာသေချာမှပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပြွန်တွေကိုပြန်ဆက်အောင်လုပ်ရတာအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ကလေးမယူဖြစ်တော့တာ လုံးဝမသေချာသေးဘူးဆိုရင် သားကြောဖြတ်တဲ့နည်းနဲ့ သန္ဓေတားဖို့မရွေးသင့်ပါဘူး။
ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ခဲတာကတော့ သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာပါ။ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပြွန်နှစ်ခုဟာ အခန့်မသင့်လို့ပြန်ဆက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရင်ကိုယ်ဝန်ဟာသာမန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ သားဥပြွန်လို သားဥအိမ်လိုနေရာမျိုးမှာ မှားပြီးသန္ဓေတည်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းပိုများတတ်ပါတယ်။ဒါဟာ အသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်လို့ သားကြောဖြတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရာသီမလာတာမျိုးဆို သတိထားသင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကတော့ အတော့်ကိုနည်းပါတယ်။သားကြောဖြတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သားကြောဖြတ်တဲ့နည်းပေါ်မူတည်ပြီးနောက်တစ်ခါရာသီလာတဲ့အချိန်အထိ သို့မဟုတ် သုံးလအထိသန္ဓေတားဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုမှီဝဲဖို့လိုပါတယ်။ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ သားဥပြွန်တွေ အနာကျက်စေဖို့ အချိန်ပေးရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သားကြောဖြတ်တာဟာလည်း အခြားခွဲစိတ်မှုများလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသွေးယိုတာ ပိုးဝင်တာလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သားကြောဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆတွေဖြစ်တဲ့ အကြောသေသွားတာ သွေးဆုံးကိုင်တယ်ဆိုတာတွေဟာမှားပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ oestrogen ဟော်မုန်းဟာ သားဥအိမ်ကထွက်တာဖြစ်ပြီး သားဥပြွန်နဲ့မသက်ဆိုင်လှပါဘူး။မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ အသက်ကြီးမှသားကြောဖြတ်တတ်ကြတဲ့အတွက် သဘာဝအတိုင်းသွေးဆုံးကိုင်ချိန်ကို သားကြောဖြတ်ခြင်းကြောင့်လို့ အထင်မှားတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သားကြောဖြတ်တာဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီး ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးကိုယ်ဝန်တားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကလေးပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ခက်တဲ့အတွက် သေချာမှသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေလိုပါတယ်။